Dhageyso:-Guddoomiye xilka qaadis lagu sameeyay oo si kulul uga hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 18 August 2018 18 August 2018
Guddoomiyihii hore ee Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulle Fiidoow ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyay Wasiirka arrimaha gudaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Waxa uu sheegay Fiidoow in xilka qaadistaas aan lagu wargelin,isla markaana uu ku arkay Baraha Bulshada in xilkii guddoomiyenimo ee Degmada Jalalaqsi laga qaaday .
“Majirto cid igu wargelisay in xilkii leyga qaaday laakin waxana ku arkay Facebook,xilka waa leyga qaadi karaa waxba igama halaabaayo waayo meeshii aan ku dhashay ee Jalalaqsi ayaan joogaa yuu sii raaciyey hadalkiisa.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada Hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Wareegto Xafiiskiisa ka soo baxday ayaa waxaa xilkii looga qaaday mas’uuliyiin uu kamid yahay Maxamed Cabdulle Fiidoow oo ahaa Guddoomiyaha Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan.
Xoghayihii hore ee qaramada midoobe oo geeriyooday